Axmed Madoobe oo ku dhawaaqay go’aan liddi ku ah Xidig iyo Seeraar -News and information about Somalia
Home Warkii Axmed Madoobe oo ku dhawaaqay go’aan liddi ku ah Xidig iyo Seeraar
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe, ayaa amray ku siiyey ciidamada maamulkiisa in ay soo qabtaan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah.
Shaqsiyaadka uu Axmed Madoobe amray in lasoo xiro ayaa waxaa ku jira Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar.
Labadaan xubnood ayaa haatan waxay isku arkaan in ay yihiin madaxweyneyaasha Jubbaland.
Hase ahaatee, waxaa wehliya Axmed Madoobe oo doorashadiisu ay kasoo horjeesatay xukuumadda dhexe.
Xidig iyo Seeraar ayaa ka shidaal qaata dowladda federaalka, taasoo damacsan in ay meesha uga saarto Axmed Madoobe.
Sikastaba ha ahaatee, xubnahaan ayaa ciidamo ku haysta qaybo kamid ah Kismaayo, halkaas oo ay ku maalgeliso xukuumadda federaalka.
Previous articleDuqa Muqdisho oo la kulmay dhiggiisa Duqa magaalada Durban ee dalka Koofur Afrika
Next articleFaah Faahin: Darawal Mooto Bajaaj Oo Lagu Dilay Xaafad Ka Tirsan Muqdisho
Man United Oo Dhabarka Loo Saaray Guuldaradii Ugu Horaysay Ee Xilli...